के र’क्सी पिएर यौ’न स’म्बन्ध राख्दा थप रोमाञ्चक हुन्छ ?पुरा हेर्नुहोस -
हामीकहाँ यौ’नलाई ‘छा’डा’ विषय मानिन्छ । यौ’नका विषयमा खुला चर्चा गर्नु त्यती शोभनिय मानिदैन । त्यसैगरी म’दिराको कुरामा पनि समाजले नाक खुच्याउँछ । एक हिसाबले यौ’न र म’दिरा दुबै बर्जि’त विषय हुन् ।
रमाइलो त के भने म’दिरा र यौ’न एकअर्काको परिपुरक हुने कतिपयको बुझाई पाइन्छ । अर्थात म’दिराले यौ’नका लागि मुड बनाउँछ भन्ने उनीहरुको धारणा छ । अर्कोतिर मदि’राले यौ’न जीवनलाई नराम्ररी अ’सर गर्ने तर्क पनि गरिन्छ ।
मान्छेलाई यी दुबैप्रति अधिक चासो चाहि छ । गुगलमा धेरैले के खोजेको पाइन्छ भने, ‘के मदि’राले यौ’न जीवनलाई उत्कर्षमा पु¥याउँछ ?’
यदि त्यसो हो भने कुन चाहि म’दिरा यौ’नका लागि उचित हुन्छ ? के म’दिरा पि’एपछि पुरुषले लामो समयसम्म यौ’न क्रि’यामा भाग लिन सक्छन् ? के महिलाले म’दिरा पिएपछि यौ’नमा अरु आनन्द लिन सक्छन् ?
मदि’रा र महिलाको यौ’न अनुभव
मदि’रा र यौ’नको सम्बन्धबारे सबैभन्दा पहिला विलियम शेक्सपियरले लेखेका थिए । उनले आफ्नो नाटक म्याकबेथमा म’दिराको बारेमा लेखेका थिए, ‘यसले तपाईंमा इच्छा जगाउँछ तर पर्फमेन्सको मोर्चामा फेल बनाइदिन्छ ।’
अहिले यस विषयमा केही शोध भएका छन् । उक्त शोध अनुसार संयमित मात्रामा म’दिराको सेवनले मुड हल्का बनाउँछ । यसले महिला र पुरुष दुबैका लागि उस्तै नतिजा दिन्छ । तर, म’दिराको मात्रा बढी भएमा त्यसले यौ’न जीवनलाई बर्वा’द बनाउँछ ।
म’दिरा जब मस्ति’ष्क र शरीरमा हावी हुन थाल्छ तब यौ’न भावना हराउँछ । यौ’नको आन’न्द महसुष गर्न सक्दैन । खासगरी महिलाले म’दिरा पिएपछि यौ’न आ’नन्द अनुभूत नगर्नुको कारण म’दिराले भेजा’इन आसपासमा रक्त संचार जुन तिब्रतामा हुनुपर्ने हो, सो हुन दिदैन । साथै भेजाइनामा चिल्लोपन पनि कम आउँछ । यस्तो अवस्थामा महिलाका लागि यौ’न पी’डादायी बन्न पुग्छ ।
नियन्त्रित मात्रामा लिइएको म’दिराले यौ’नको इच्छा बढाउँछ । यो महिला र पुरुष दुबैमा लागु हुन्छ । तर, जब म’दिराको न’सा यौ’नको नसामाथि हावी हुनपुग्छ, तब पुरुषमा शिथिलता आउँछ ।
बढी मात्रामा म’दिरा पिएपछि पुरुषले उस्तै सक्रियताका साथ र उहि गतिका साथ यौ’न क्रियामा भाग लिन सक्दैनन् । त्यसो त नियमित मात्रामा मदि’रा सेवनले क्रोनिक इरेक्टाइल डिसफंसन जस्ता सम’स्या ल्याउँछ, जसले यौ’न जीवनमा पनि अ’सर गर्छ । मदि’रा पिएपछि पुरुषहरुमा यौ’न रुची त जाग्छ, तर सक्रियतासाथ यौन क्रियामा सहभागी हुन सक्दैनन् ।
← सबैभन्दा धेरै गरिब हुने गर्छन् यी राशीहरु ! यस्ता छन् गरिबी हटाउन अपनाउनै पर्ने उपाय !हेर्नुहोस
याैन सम्पर्कपछि सबैकाे चासो रहने वीर्य बाहिर निस्कने यस्तो छ रहस्य! →